Iska ilaali isticmaalka joogtada ah ee bootar ka (talcum) waxa uu sababaa kansarka ku dhaca xubinta taranka haweenka - Horn Future
Daraasad cusub ayaa lagu ogaaday in haweenka si joogta ah ugu isticmaala bootar loo yaqaano (talcum powder)xubintooda taranka ay yihiin kuwo aad ugu nugul sadex laab in uu haleelo kansarka ku dhaca xubinta naalada ilmuhu ka abuurmo ee haweeynada.
Warbixintan oo ay daabacday wakaalada «Reuters» oo la xidhiidhay cilmi baadhista cudurada ayaa sheegtay in daraasaddani ay ku jirtay su’aalo la waydiiday 2041 haween ah oo qaba kansarka xubinta naalada ilmuhu ka abuurmo iyo 2100 oo ka bad qaba cudurkan oo aanan isticmaalin bootar ka.
Daraasadan ayaa lagu ogaaday in haweenka si joogtada ugu isticmaala xubnaha taranka iyo hareerihiisa ama mariya kalsoonada iyo suufka siinka la iskaga bi’yo ay korodhay in uu haleelo halis kansarka ku dhaca xubinta naalada ilmuhu ka abuuro 33%.
Daniel Cramer oo ahaa cilmi baadhaha weyn ee daraasadan oo madax ka ah xarunta haweenka iyo dhalmada iyo cilmi baadhista cudurada ee dhakhtarka haweenka ee Brigham ee Boston oo isku dayay marar hore in lagu qasbo shirkadaha in ay ku qoraan digniino caagadaha bootar ku jiro laakiinse kuma uunan guuleysan ololihiisan.
Cramer oo la hadlay(Reuters Health) qaybteeda caafimaad ka ayaa waxa uu yidhi «Waxa dhici karta in uu si fudud isku gu badilo arrin halis ah,waa budo wanaagsan oo meesha qoyan lagu engejiyo laakiin haweenku waa in ay ogaadaan in isticmaalka joogtada ah laga yaabo in budadani ay gudaha u gasho xubinta taranka iyo meelaha u dhow ,,waxaan qiyaasi karaa hadii ay ogaan lahaayeen haweenku, marnaba may isticmaaleen bootar kan »,ayuu yidh.
Cramer iyo kooxdiisa ayaa waxa ay ka digeen markii ugu horeysay in uu xidhiidh ka dhexeeya isticmaalka bootar kan ee meelaha xubinta taranka iyo kansarka ku dhaca xubinta naalada ee ilmuhu ka abuurmo sanadkii 1982.
Xukun ay soo saareen xeerbeegtida Maraykanka oo isku xidhaya xidhiidhka ka dhexeeya isticmaalka joogtada ah ee bootarkan ee ay sameyso shirkadda Johnson & Johnson iyo haweenay u dhimatay kansarka xubinta naalada ilmuhu ka buuro ayaa waxa uu wel wel aad u weyn ku abuurey isticmaalayaasha bootar kan, laakiinse culumadu waxa ay leeyihiin lama hayo caddeyn ku saabsan jiritaanka halis dhab ah oo dhammeystiran.
Xeerbeegtida gobolka St. Louis ayaa ka codsatay shirkaddan in ay siiso magdhow dhan $ 72 malyuun oo dollar qoys haweenay u adeegsadatay ilmeheeda bootarkan qaybta caruurta ee (Baby Powder) ee nuuca (Shower to Shower ) muddo tobannaan sano ah,xili shirkaddu ku nuuxnuuxsatay in ay jirto cadeeymo cilmi ah oo sugaya bootarkan bad qabkiisa mudo ka badan tobonaan sano.
« Russia oo bilowday in ay kala baxdo ciidankeeda dalka Syria kadib go’aankii shalay uu ku dhawaaqay hogaamiyaha dalkaasi	» Maal qabeen Sucuudi ah oo kiraystay maqaaxi 300 oo qof loogu talagalay si isaga iyo xaaskiisu ay ugu casheeyaan